रोल्पामा विप्लवका दुई र कांग्रेसका एक कार्यकर्ता पक्राउ – जलजला अनलाइन
रोल्पामा विप्लवका दुई र कांग्रेसका एक कार्यकर्ता पक्राउ
Posted on August 10, 2018 Author Comments Off on रोल्पामा विप्लवका दुई र कांग्रेसका एक कार्यकर्ता पक्राउ
साउन २५, रोल्पा । प्रहरीले शुक्रबार पश्चिम रोल्पाबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका दुई कार्यकर्ता र कांग्रेसका एक कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायतका नेतालाई पक्राउ गरेको विरोधमा पश्चिम घर्तीगाउँमा कोण सभा गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्य एवम् माडी गाउँकमिटी ईन्चार्ज दिनेश वली, नेकपा निकट मजदुर संगठनका जिल्ला अध्यक्ष सूर्य खड्का र नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति गोपाल घर्तीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय घर्तीगाउँले पक्राउ गरेको हो ।
ईलाका प्रहरी प्रहरी कार्यालय इन्चार्ज ईन्सपेक्टर राजबहादुर पहाडीका अनुसार विरोधस्वरुप कोण सभा नगर्न भन्दा अटेरी गरेकाले पक्राउ गरिएको जनाए ।
विरोध कार्यक्रम गर्न रोक्ने माथिको आदेश पालना गर्दै पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुलाई पक्राउ गरेर इप्रका घर्तीगाउँमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितका एक अधिकारीका अनुसार विरोध प्रदर्शनस्थल बाहिर कोणसभा गर्न खोजेकाले नियन्त्रणमा लिईएको जनाए । नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी सन्तोष सुवेदीले आफ्ना पार्टीका नेता पक्राउ परेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘सामाजिक दलाल सत्ताले जनताबीचमा विरोध गर्दैगर्दा डाँका शैलीमा प्रहरीले कब्जा गरेको छ’, सेक्रेटरी सुवेदीले भने, ‘पक्राउ परेकालाई निःशर्त रिहाई नगरे भोलीबाट सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन्छौं ।’
शान्तिपूर्णरुपमा विरोधका कार्यक्रम गर्न नदिने सरकारको रवैयाप्रति नेकपाले खेद समेत प्रकट गरेको छ । नेकपाले सशक्त प्रतिरोधबाट उत्पन्न हुने प्रस्थितीको सरकारले महँगो मूल्य चुकाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
विगतमा घर्तीगाउँमा गरिएको विरोध कार्यक्रममाझैँ आजको कार्यक्रममा समेत सहकार्य गर्न खोजेको भन्दै कांगे्रेसका क्षेत्रीय सभापति घर्ती समेत पक्राउ परेका हुन् । माइकसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा ल्याएको छ । छाड्ने या थुन्नेबारे सुरक्षा अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।
-खेमबहादुर बुढा/अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार
कञ्चनपुरमा फेरि चर्किन थाल्यो आन्दोलन, अब के होला स्थिति ?
भदौ २८, महेन्द्रनगर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राख्दै कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा पुनः आन्दोलन शुरु भएको छ । यो खबर विष्णुप्रसाद देवकोटाले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन्, महिला अधिकारकर्मी, स्थानीय र नेविसंघले चरणबद्ध आन्दोलन विहीबारदेखि शुरु गरेको हो । भदौ ८ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय […]
यी अमेरिकी नेपाली, जो आफैँले बनाएको विमान चढ्छन्, विमान चढ्ने पहिलो नेपाली महावीर (भिडियो)
असोज १९, काठमाडौं । ‘नेपालबाट आएका महावीर पुनलाई मैले बनाएको विमान ४५ मिनेट चढाएर अमेरिकाको फिनिक्स शहर घुमाएँ, म बाहेक मेरो विमान चढ्ने पुन पहिलो व्यक्ति हुन्।’ यो खबर मणि दाहालले नेपालखबरमा लेखेका छन् । सन् २००८ मा अमेरिकालार्इ आर्थिक संकटले गाँज्याे। लगानी बैंक लेहम्यान ब्रदर्स टाट पल्टिएपछि शुरु भएको संकटपछि धेरैले रोजगारी गुमाए। कतिको […]
वहसमा प्रदेश ५ को राजधानी: दाङ कि बुटवल ?
सल्यानमा मजदुर गर्ने बुबाकाे मृत्यु भएपछि छाेरालार्इ वडाध्यक्षको सहयाेग